सरकारले सकेन वन्द खुलाउन, नेपाल बन्दमा कहाँ-कहाँ के- के भयो ? (अपडेटसहित पढ्नुहोस्)-Nagarikaawaj.com
सरकारले सकेन वन्द खुलाउन, नेपाल बन्दमा कहाँ-कहाँ के- के भयो ? (अपडेटसहित पढ्नुहोस्)
काठमाडौं कात्तिक, २५ । नेकपा – माओवादी नेतृत्वको ३३ दलीय मोर्चाले घोषणा गरेको नेपाल बन्दले आज देशभरको जनजीनव प्रभावित पारेको छ । बन्दका क्रममा कतिपय ठाउँमा तोडफोड, आगजनी र बम बिस्फोटका घटना भएका छन् ।
राजधानि सहित मुलुकभरका विभीन्न ठाउँमा सरकारले बन्दलाई असफल बनाउन नेपाली सेनाको समेत सहयोग लिएपनि त्यत्ती सफल भएको छैन । विभिन्न ठाउँमा स्वतस्फूर्तरुपमा बन्दको अवज्ञा हुन थालेको छ । बन्दकर्तालाई भेट्नासाथ गिरफ्तार गरिने भएपछि उनीहरु सार्वजनिकरुपमा सडकमा देखा भने परेका छैनन् । सरकारले वन्द खुलाउने प्रयास गरेपनि वैद्य माओवादी सहितको डरले जनताहरु खुलेर हिड्न पाएका छैनन । सरकारले वन्द खुलाउन जतिसुकै प्रयास गरेपनि वन्द्धको पुर्ण प्रभाव लगभग मुलुकभरनै परेको छ । मुख्य घटनाहरु सक्षेपमा ।
– भरतपुर नगरपालिका कमलनगरमा भारतीय नम्वर प्लेटको गाडीमाथि अज्ञात समूहले वम प्रहार गरेको छ । आर जे ०४ जि ३४६६ नम्वरको गाडीमाथि विहान साढे १० वजे मोटरसाइकलमा आएका २ जनाले वम प्रहार गरेका हुन । भारतको विहारबाट सामान ल्याएको सामान झारीराखेको अवस्थामा वम प्रहार गरेको प्रहरीले वडा प्रहरी कार्यालय नारायणगढले जनाएको छ । प्रहार भएको वमलाई प्रहरीले तत्काल निस्कृय पारेकाले ठूलो क्षति भने हुन नपाएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । त्यस्तै नागरिक दैनिक पत्रीकाको गाडीमा पनि आगलागी भएको छ ।
– आमहडतालका क्रममा जबर्जस्ती बन्द गराउन खोज्ने ३४ जनालाई प्रहरीले काठमाडौँ र ललितपुरबाट पक्राउ गरेको छ । बन्दकर्ताले विरोधका कार्यक्रम शान्तिपूर्ण भने पनि तोडफोड र आगजनीका घटना भएका छन् । बन्द पूर्ण रूपमा असफल पार्न र जनजीवन सामान्य बनाउन प्रहरीले विशेष सतर्कता अपनाएको प्रहरी प्रवक्ता वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक गणेश केसीले राससलाई जानकारी दिनुभयो । उहाँले सडकमा चल्ने सवारी साधनलाई पूर्णरूपमा सुरक्षाको व्यवस्था गरिएको बताउँदै बिहान अध्याँरोमा कोटेश्वर र भक्तपुरमा भएका तोडफोड र आगजनीमा संलग्नहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको जानकारी दिनुभयो ।
– बट्टारबजारमा रहेको नुवाकोट आदर्श बहुमुखी क्याम्पसको ढोकामा बिहान भेटिएको सकेट बम सेनाको टोलीले निष्कृय बनाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । यसैगरी जिलिङ गाविसको काशीटारस्थित देवीघाट–गल्छी सडकमा ‘खतरा’ लेखिएको शङ्कास्पद दुई पोका फेला परेको छ । उक्त पोका भएको स्थानमा सेनाले नियन्त्रणमा लिएर बम भए नभएको अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
– काभ्रेका डेढ दर्जन स्थानमा रहेका नक्कली बम नेपाली सेनाले निष्क्रिय गरेको छ । खड्ग दल धुलिखेलका अनुसार श्रीखण्डपुर, तामाघाट, लामीडाँडा, चण्डेश्वरी क्षेत्र र कुन्ताबेंसीमा रहेको नक्कली बम निष्क्रिय भएको छ । खड्ग दलले रविओपी र खामामा रहेको बम निष्क्रिय गर्ने तयारी गरिरहेको प्रमुख सेनानी जगत पौडेलले जानकारी दिनुभयो । ३३ दलीय मोर्चाले आह्वान गरेको बन्द हड्तालको बनेपा, धुलिखेल, पाँचखाललगायत साना सहर बजारमा प्रभाव परेको छ । बनेपामा छिटफुट रूपमा केही मोटरसाइकल चले पनि बनेपा हुँदै छुट्ने लामो तथा छोटो दूरीका कुनै सवारीसाधन सञ्चालनमा छैनन् ।
– सरकारले बन्दको अवज्ञा गर्दै सरकारी सवारी साधनहरु सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको छ । सरकारी सवारी साधन सञ्चालन नगर्नेलाई कारवाही गर्नेसमेत सरकारले चुनावी दिएको छ । यसैवीच काठमाडौंमा सुरक्षाकर्मीको पहरामा साझा बस सञ्चालन गर्न थालिएको छ भने विहानको तुलनामा अय सवारी साधन पनि सडकमा देखा पर्न थालेका छन् । काठमाडौंमा माइतीघरबाट बन्दको अवज्ञास्वरुप स्वतस्फूर्त जुलुस निकाल्ने तयारी गरिएको छ ।त्यस वाहेक रुपन्देहीको सदरमुकाम भैरहवा देखी बुटवल सडकखण्डमा पनि प्रहरीको सहयोगमा माईक्रो वस सुचारु भईसकेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । यस क्षेत्रमा प्रहरीले स्कटिङनै गरेर वस चलाएको हो ।
– काठमाडौं २ नम्बर क्षेत्रका एकीकृत नेकपा माओवादीका उम्मेद्वार लीलामणि पोखरेलको काठमाडौं वडा नं ९ बत्तीस पुतलीस्थित प्रचार कार्यालयमा सोमबार विहानै अज्ञात समूहले आगजनी गरेको छ । कार्यालयभित्र तोडफोड आगजनी भएको र केही कुर्सीहरु जलेको तर घरमा ठूलो क्षती नभएको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन् ।
– उदयपुरको सदरमुकाम गाईघाटमा आज बिहान ७ मिनेटको अन्तरमा ४ वटा वम बिस्फोटन भएका छन । बिहान ४ बज्न २ मिनेट बाँकी छदाँ सदरमुकाम गाईघाटलाई लक्षित गरी चारै दिशामा बम बिष्फोटन भएको हो । नयाँ बसर्पाकको आसपाको क्षेत्र, पुरानो गाईघाट र गाईघाट बजारको उत्तर र पश्चिम तर्फ विस्फोटन भएको छ । आसन्न मसिर ४ गतेको निर्वाचनलाई असफल पार्न नेकपा-माओवादी सहितको ३३ दलिय मोर्चाले सोमबार आव्हान गरेको आमहडताल सफल पार्न बिस्फोटन गराईएको हुन सक्ने प्रहरीले अनुमान गरेको छ । तर बिस्फोटन कहाँ र कस्ले गराएकेा भन्ने अहिलेसम्म पत्ता नलागेको प्रहरी प्रमुख एसपी अजय भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । बिस्फोटन वम नै नभई पटका पनि हुन सक्ने एसपी भट्टराईले वताउनुभयो । आमहडताल र भोलीदेखिको यातायात बन्दलाई लक्षीत गरि सर्वसाधरणलाई आतकं तुर्‍याउन पटका पटकाएको हुन सक्ने प्रहरी उपरिक्षक भट्टराईले वताउनुभयो । बम बिष्फोटको जिम्मा हालसम्म कसैले लिएको छैन । यसैबीच स्थानीय प्रशासन र स्थानीयबासीले बन्द खुलाउन बन्दकर्तालार्इ आग्रह गरेका छन् ।
– बन्द गराउँदै हिँडेका ३३ दलका कार्यकर्ताले दोलखामा रोकिराखेका अरनिको यातायातका ३ वटा बसमा आगजनी गरेको छ । पार्किङ गरेर राखेको बा ३ ख १८०६, बा २ ख ३५३४ र सानोठिमीमा ना ३ ख ३६११ नम्बरको बसमा आगजनी गरेको हो ।
– नेकपा-माओवादीले आहृवान गरेको आमहडतालका क्रममा राति भक्तपुर र थिमिमा दुई गाडी आगजनीमा परेका छन् । खरिपाटीमा शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयको बा१झ ७४८० नंको पार्किङ गरिराखिएको गाडीमा राति करिब १ बजे आएको अपरिचित समूह आगजनी गरी फरार भएको छ । आगजनी गरेको थाहा पाएलगत्तै स्थानीयवासीले आगो नियन्त्रणमा लिएकाले गाडी पूर्ण रुपमा जल्नबाट बचेको प्रहरीले जनाएको छ । गाडीका केही भाग जलेर क्षति पुगेको बताइएको छ । मध्यपुरथिमी नगरपालिका वडा नं ११ थिमि एसओएस नजिकैको एक बालुवा डिपोमा रोकिराखिएको बसमा आगजनी गर्दा बस पूर्ण रुपमा जलेर नष्ट भएको छ । सिन्धुपाल्चोक मुढे देउराली चल्ने ना३ख ३७११ नंको बसमा आज बिहान ३:३० बजे आगजनी गरिँदा बस पूर्ण रुपमा जलेर क्षति भएको छ । दुईजना अपरिचितले बसमा पेट्रोल छर्किन थालेपछि गाडीभित्र सुतेका सिन्धुपाल्चोक घर भई सोही गाडीमा खलासी काम गर्ने तुलबहादुर तामाङ बाहिर निस्केर भागेलगत्तै गाडीमा आगो लगाइएको जनाइएको छ । आगो समयमै नियन्त्रण नहुँदा गाडी पूर्ण रुपमा जलेर क्षति भएको छ । आगो लगाउने समूहको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।